September | 2017 | Danya Wadi
၁၉၅၈ – ၁၉၆၂ ခု မြန်​မာ့ နိုင်​ငံ​ရေး တတိယတွဲ၊ စာမျက်​နှာ (၂၃၀) ထဲက ရိုဟင်​ဂျာ
By danyawadi September 30, 2017 Leaveacomment
# ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ခု နောက်ပိုင်းမွေးဖွားသောသူများထံသို့ လူကြီးမင်းတို့သည်အကြောင်းကြောင့်ရခိုင်ပြည်၏သမိုင်းအမှန်ကိုမသိရှိနိုင်သည်မှာသဘာဝကျပါသည်။ကျနော်တို့ ပြည်မတွင်နေတိုင်သောသူ/ပုဂ္ဂိုလ်များသည်နယ်စပ် ပြည်နယ် တွင်နေတိုင်သောလူမျိုးနွယ်စုတို့၏သမိုင်း ဖြစ်ရပ်တိုင်းကိုသိရှိနိုင်ရန်မလွယ်ကြောင်းနားလည်ပါ သည်။ သို့သော်ယနေ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိကြောင့်/ဤနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားမဖြစ်ကြောင့်ကန့်ကွက်နေခြင်းသည်မြန်မာ့ သမိုင်းနှင့်ကိုက်ညီကြရဲလားလို့မိမိကိုဆန်းစစ်ဖိုးလို ကြောင့်လေးနက်စွာတိုက်ထွန်းပါတယ်။ အဘယ်ကြောင်းဆိုသော်————– *** ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမျိုးသါးခေါင်းဆောင်ကြီးနှင့် ၁။ ဦးနုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလွတ်လပ်ရေးဒု-ခေါင်းဆောင် ၂။ ဦးစပ်ရွှေသိုက်သမ္မတနိုင်ငံတေါ်၏ပထမဦးဆုံး။ ၃။ ဦးဘဆွေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး/ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း။ ၄။ ဦးနေဝင်းကာ/ချုပ်(ဖဆပလခေတ်/တော်လှန်ရေး ကောင်စီ/ပထစ/မဆလခေတ်ဦးပိုင်း) ၅။ ဗိုလ်မှုးချုပ်အောင်ကြီးဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြေး) ၆။ ဗိုလ်မှုးချုပ်သန်းဖေဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)စည့် ခေါင်းဆောင်အသီးသီးတို့က ယခင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ သမိုင်း ကို သိရှိသောကြောင့် ထိုသူတို့ကို တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးဖြစ်သော ဒိုင်ယာခီအုပ်ချုပ်ရေး ကိုယ်စား လှယ် အဖြစ် ၎င်း ၁၉၄၇ ခု တိုင်းပြုပြည်ပြု လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ တွင်၎င်းမဲထည့်ပိုင်ခွင်နှင့််ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့်အသီးသီး ကို၎င်း #ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့သည်ကိုမှားတယ်လို့ပြောအုန်းမလားထိုအချိန်နိုင်ငံခြားသားမဲထည့်ခွင့် မရှိဘူး […]
ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ တံခါးဖွင့်အစည်းအဝေးအတွင်း လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်ချက်တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်း တောင်းဆိုတာတွေ ကို အသီးသီးပြောကြပါတယ်။ ဒီပြောဆိုချက်တချို့ကို ကောက်နုတ်စုစည်းပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ဆက် ထားပါတယ်။ Originally published at – https://burmese.voanews.com/a/4049652.h…
Gang raping and raping of young women
By danyawadi September 29, 2017 Leaveacomment
“Gang raping and raping of young women- and even older women too, even pregnant women- and also killing their children, throwing children in the fire, these have been all documented cases”- Yanghee Lee; U.N. Special Rapporteur on Myanmar #RohingyaCrisis #Rohingya #Myanmar #Bangladesh
Rohingya History (Video)
ရိုဟင်ဂျာမူစလင် တွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု နဲ့ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်နေတာကို ရပ်တန့် ဖို့ ​​​ဆို
မခင်ဖြူထွေး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာမူစလင် တွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ လူသားထုအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်နေတယ်လို့ ဆိုပြီး ဒါတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ဖိအားပေးတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် လက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုတွေကို ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီက ပိတ်ပင်ဖို့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့် အရေး အဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ Amnesty International အဖွဲ့က တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ ဒီကနေ့ လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က မြန်မာ့အရေး ရှင်းလင်းပြောကြားဖို့ ရှိနေချိန်မှာပဲ ခုလို တိုက်တွန်းလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မခင်ဖြူထွေးက အပြည့်စုံ တင်ပြပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ARSA လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေက လုံခြုံရေး ရဲကင်းစခန်းတွေကို တိုက်ခိုက် ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်တပ် ဘက်က နယ်မြေ ရှင်းလင်း […]
လုံခြုံရေး ကောင်စီမှာ ဒီနေ့ဆွေးနွေး သွားသော အဓိက အချက်များ
ဒီညနေ နယူးယောက်စံတော်ချိန် ၃ နာရီကနေ ၅ နာရီ၁၅ မိနစ်ကြာအောင် လုံခြုံရေးကောင်စီက မြန်မာပြည် အနောက် တံခါးအရေးကို အလှည့်ကျ အီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံကသဘာပတိအဖြစ် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ တံခါးပိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက် အများ ပြည်သူ ကြည့်လို့ရအောင် Live လွင့်တင်ပေးပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီဝင် ၁၅ နိုင်ငံအပါအဝင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးချုပ်၊ မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ကြား သလောက် ကောက်ချက်ချ ရေးတာပါ။ ပြောကြတာများလွန်းလို့ကျန်ခဲ့တာလဲများစွာရှိမှာပါ။ ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ ပြောသူအားလုံး ရဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေပါ။ 1. သြဂုတ်လ ၂၅ မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ ARSA ကို အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ဖြစ်လို့ ရှုံချကြပါတယ်။ 2. အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ (အဓိက ကတော့ […]